Uchishandisa Kuzviongorora Kwayedza Kuvandudza iyo Salesforce Chiitiko | Martech Zone
Kugara kumberi kweshanduko dzinokurumidza uye kushandurwa mune yakakura-chikamu bhizinesi chikuva, senge Salesforce, zvinogona kunetsa. Asi Salesforce uye AccelQ vari kushanda pamwechete kusangana nedambudziko iri.
Uchishandisa AccelQ's agile mhando manejimendi manejimendi, iyo inosunganidzwa zvine simba neSalesforce, inomhanyisa zvakanyanya uye inovandudza mhando yesangano reSalesforce rinoburitswa. AccelQ inobatana papuratifomu makambani anogona kushandisa kugadzirisa, kubata, kuitisa, uye kuteedzera Salesforce kuyedzwa.
AccelQ ndiyo yega inoenderera bvunzo otomatiki uye manejimendi chikuva chakanyorwa pane iyo Salesforce AppExchange. Muchokwadi, vanoverengeka vevatengesi veSalesforce vebhizinesi vakaitira AccelQ, vachipa kukosha kwayakaunza kukwidziridza maSecureforce ekuburitsa macircuit. AccelQ yakapfuura nepakati peyakaomesesa ongororo maitiro kuti inyorwe paSalesforce AppExchange. Muchokwadi, akati wandei evatengi veSalesforce vebhizinesi vakavhotera AccelQ, vachipa kukosha kwayakaunza kukwidziridza maSalesforce ekuburitsa macircuit.
Yakazara Bvunzo Management Platform
AccelQ izere bvunzo manejimendi manejimendi anobatsira mabhizinesi kuendesa mhando yeSalesforce kuitisa. Yakagadzirirwa gore, AccelQ inokurumidza uye nyore kuisa pane Provar kana Selenium.
Zvishandiso zvazvino zvinoedza kuyedza maSalesforce kuyedza hazvibudirire nekuti hazvikwanise kuunza maonero ebhizinesi. Uye ivo vanotokundikana kubata Salesforce's zvine simba mushandisi interface uye ayo zvinhu. AccelQ inorerutsa, inogadzira, uye inomhanyisa Salesforce bvunzo otomatiki neyakagara yakavakwa Salesforce Universe, AccelQ's yakasarudzika mhinduro yekutsigira iyo Salesforce ecosystem yezvigadzirwa.
Salesforce inogona kuwana runako runonetsa pamwe neayo asimba ewebhu zvemukati, iframes, uye Visualforce, kutumidza mashoma, pamwe nekudiwa kwekutsigira Salesforce's Mheni neClassical editions. AccelQ yakanamatira inobata zvese izvi zvakaoma mune yakapusa isina-kodhi otomatiki anowanikwa pane iro gore. Kumisikidza uye kusunungura macircule akakurumidza kuwedzera mhiri kweAccelQ's Salesforce vatengi base uku vachiunza mhando yepamusoro kubhizinesi nemutengo wakaderera kwazvo.
AccelQ's Salesforce test suites inobata module-yakavakirwa kana shanduko-based kuronga bvunzo, kuuraya, uye kuteedzera nezvakafanogadzirirwa zvirongwa. Inoitisa makambani kuteedzera akaedzwa kesi nemabhizimusi maitiro ekuona uye inogonesa kukurumidza kusimbisa macircle ane anoenderera ekugadzirisa shanduko mune yavo Salesforce kuita
Salesforce Zvemukati Pack zvinomhanyisa Salesforce bvunzo otomatiki neyakafanotaurwa Salesforce Universe, isina makodhi mutauro wechisikigo otomatiki, uye otomatiki shanduko yekukanganisa ongororo kugona. Makambani anokwanisa kuwana pamusoro pe3x kumhanyisa muchikamu chekusimbiswa kwemhando yeSalesforce kuitisa.
Kwayedza Yekushandisa uye Management
AccelQ inopa bvunzo otomatiki iri mheni-inokurumidza uye yakapusa, seSalesforce. Inopa:
Muenzaniso wekutarisa wekambani yeSalesforce yekumisikidza uye bhizinesi maitiro
Kwete-kodhi otomatiki iri nyore uye ine simba
Akangwara bvunzo kuronga uye kuuraya kwegore kwakagoneswa nekuenderera kusanganisa
Yakakwana bvunzo manejimendi ine in-yakavakwa inoteedzera kune ese bvunzo zvinhu
Agile dashibhodhi yekuteedzera kwekutevera uye yakajeka nhoroondo
Zvakare, AccelQ inozadzisa Selenium kumakambani anoda kushandura yavo yeSalesforce yekuyedza kuyedza neSelenium, kunyanya kana bhuku rekuyedza roga risingakwanise kuvhara izvo zvekuyedza zvekuyedza zvekare.
Zvikumbiro zvakavakirwa paSalesforce zvakaomarara uye zvinogona kunetsa kuyedza neSelenium. AccelQ inobvumira vanoedza kuburitsa makesi ebvunzo eSalesforce zviri nyore uye inowedzera simba raSelenium, ichiita kuti ive yakavimbika, inotyisa, uye inodhura.
AccelQ Salesforce Yekuongorora Nyaya Yekudzidza
Mumwe Salesforce mutengi yakagonesa vashandisi vayo veSalesforce vebhizimusi vane yakazara, mu-sprint otomatiki kuyedza kugona kubva kuAccelQ
Mutengi, ruzivo rwepasirese, data, uye kambani yekuyera iri kuUK, yaida kusimudzira ruzivo rwevashandisi pamwe nehunhu uye kugona kweiyo Salesforce vatengi hukama hwehukama manejimendi. Kuitwa kweSalesforce kwakakosha kubhizinesi, asi pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, kuyedza kudzokorodza kwaizodai kwakadya huwandu hwakawanda hwezviwanikwa.
Saka mutengi aida ku:
Shandura bhizinesi maitiro ekugadzirisa pane matanhatu akasiyana maSalesforce ma module
Bata kuomarara kweSalesforce Mheni zvinodzora zvekudyidzana kwakazvimirira
Deredza kuongororwa kwemanyorerwo kubva kumazuva mazhinji kusvika kumaawa mashoma
Kubudirira kugadzirisa zvine simba zvakagadzirwa uye zvakavakirwa mafuremu muSalesforce uye dzivisa kugadzirisa pamusoro
Bvumira timu yebhizinesi kuti iite mu-sprint otomatiki
Iwo ebhizinesi mabhenefiti eAccelQ, anosanganisira:
Inokurumidza, yepamusoro mhando Salesforce kuburitswa
Yakawanda-zuva echinyorwa bvunzo kuyedza yakaderedzwa kusvika kumaawa mashoma ekugadzirisa otomatiki
Kuderedza kwakakosha mumutengo uye kushanda nesimba
Modularity inogonesa kuvandudza kweye nyowani bhizinesi maitiro otomatiki neanopfuura makumi masere muzana muzana anoshandisa zvakare
Yakagoneswa ekuyedza zvikwata dhizaini uye nekuvandudza otomatiki panguva imwe chete neiyo nyowani ficha yekumisikidza
Unyanzvi hwakanakisa nezvakanaka zvinobatsira
Akabatanidzwa akanakisa maitiro uye dhizaini misimboti yekugadzirisa zvinetswa zvemberi uye kuronda
Salesforce kuyedza uye otomatiki inoda kuwedzera kukurumidza nekuda kwekumanikidzwa kweyekugadzirisa uye kuitisa macircuit. Unyanzvi hweAccelQ hwakasarudzika zvakasarudzika neyakagadzirira-kushandisa-test automation midziyo isina hunyanzvi hwekuoma uye pamusoro. NeAccelQ, mabhizinesi anogona kupa simba kune avo vashandisi vebhizinesi uye nevamwe vanobatika uye vawane kuoneka kwakazara muhunhu hwekwaitwa neSalesforce.
Yemahara Kuyedzwa kweAccelQ yeSalesforce
Tags: chirevozvoga bhizinesi maitiro kusimbisaotomatiki kudzokororwa kuyedzwabhizinesi maitiro otomatikisalesforcevatengesi vanochinjanasalesforce zvemukati kurongedzavatengesi mhenisalesforce kuyedzwaseleniumbvunzo otomatikibvunzo manejimendikuyedza kushandisa michinamavambo